Faraqa u The of Gold plated, Gold Vermeil, Gold Buuxinaya, Karat Gold
CZ Chart Qaab
zirconia cubic waa dhagax-dhigay nin u isticmaalay in meel ka mid ah dheeman. Waa qaab crystalline cubic of zirconium dioxide. Qoraalkani wuxuu ku dhexsameeysmo jirka waa adag tahay, hufan iyo waxbay ushafeeci idanka muuqashadii weyn u diamond kaamil ah. Sababtoo ah halka ay kharash yar iyo cimri dherer weyn, CZs waxaa sida caadiga ah loo isticmaalo sterl rhodium-plated ...
Daryeelidda Your Jewelry Silver plated Gold
Daryeelidda Your Silver plated Gold dahabka 1.Keep Jewelry ka adag, kuuskuus iyo xagashada iska dhigi doonaa lakabka dahab ah inay xirtaan iska dhakhso. 2.Lightly tirtir wixii aad isku sharrixi maro suuf qoyan. Waxay kaa caawin karaan in la baabi'iyo wasakh dushiisa oo xiran iska lakabka dahab ah. 3.Gently th xoqin ...
Waa maxay sababta Dooro Jewelry Gemnel
Bukit Gemnel Factory Jewelry, takhasusay soo saarka, horumarinta iyo la dhigaayo cayn kasta oo lacag ah murriyado, iyo hilqado, dugaagado, iyo nooc kale dahabka. Waxaan nahay mid ka mid ah soo saarayaasha dahabka sare taas oo si toos ah u iibiyo inay jumladlayaasha iyo dukaano adduunka oo dhan, iyo xoogga saaraan abuurista ...
cinwaanka No. 121, Chunhan Road, Bukit, Shiinaha